Izilwanyana kunye Nendalo Amahlathi
Ukusebenzisa ukuguqulwa kwemiqulu yeThumb Wood Wood
Inyiyo-ndlela, enye inyawo yebhite cubic (i-volume volume) iqulethe iinyawo ezili-12. Iimilinganiselo eziqhelekileyo 6 zimele zisetyenziswe, nangona i-10 yinto eqhelekileyo yokulinganisa. Xa ukuguqulwa kusebenza kwimithi, ama-3 ukuya ku-8 aya kufakwa. ISebe lezoLimo, 1935).
- ithathwe kwii-Converting Factors ze-Southern Pine Products, uWilliam no-Hopkins, i-USDA, ngo-1968
Imithi yokulinganisa iyingxenye yesayensi, inxalenye yobungcali; usebenzisa ezininzi iiyunithi ezahlukeneyo, ubhekane neengxaki ezininzi.
Le nkcazo ngasentla ibonisa indlela ukudibanisa ukudibanisa ukulinganisa nokuguqula imiqulu enokuthi ibe. Ukulinganisa nokulinganisela umthamo wemithi kungekhona kwintliziyo engenamandla.
Xa uthengisa imithi yakho kufuneka uqonde indlela yokulinganisa iimveliso zehlathi okanye ufumane umntu ukuba akwenze oko. Eyona nto inokudideka kakhulu xa uthetha umthengi; kakhulu kunokuba ungaphulukana nesabelo esibalulekileyo senani lakho.
Ukwenza imeko ibe yinkathazo ngakumbi, abanye abathengi basebenzise ukungazi kwemilinganiselo yokukhangela umthengisi. Bafumana ithuba lokuba benze njalo kwaye bambalwa basebenzise oku kubaluleka kwezemali. Ukwazi iinqununu zokulinganisa imithi kunzima kakhulu kwaye ngaba amahlathi abunzima xa uthetha. Amakhulu amathathu edoli ngeengxowa eziliwaka esebenzisa umthetho welogi we-Doyle ayifani kunye needola ezingamakhulu amathathu ngeengxowa eziliwaka usebenzisa umgaqo welogi lweScribner.
Uninzi lwabalandeli beemithi kunye nabasemahlathini bayavuma ukuba kukho inzuzo yokulinganisa ukhuni kunye nokulinganisela kukulinganiswa kokukhetha.
Ehlabathini lenene, kunjalo, akunakwenzeka ukuba uguqulwe ngokupheleleyo. Imbali yokulwa neengxaki zokulinganisa iigodo ukuqinisekisa ukuba umkhiqizo owenziweyo unokuveliswa kubo udale amanqaku amaninzi okulinganisa. Ezi nqununu ziziqhubela phambili ngenxa yezinto ezininzi kubandakanya ukuhweba kwamanye amazwe, ivolumu yomthamo omileyo, wamkela iiyunithi zerhafu, isiko lesithili, ukuthenga nokuthengisa izinto.
Isilinganiselo esilinganiselweyo sokhuni esetyenziselwa iphepha kunye nophethiloli yintambo . Le ngxube yomthi 4 ft. X 4 ft. X 8 ft. Equle malunga neekhilo ezili-128 zeenyawo zamanqabunga, ukhuni kunye nomoya. Ummandla womoya unokuba ngowama-40 ekhulwini kodwa ngokuqhelekileyo umyinge wama-25 ekhulwini. Uyabona ukuba ubunzima bunjani apha.
I-Pulpwood ithengwa ngokulinganisela iyaqhelekileyo kwaye isisindo ngasinye ngentambo sihluka ngokubanzi kunye neentlobo kunye ne-geography. Intambo yomthi womthi onzima oqhelekileyo uphawula phakathi kwama-5 400 iipounds kunye nama-6,075. Intambo yepalpwood intambo ikhula phakathi kwama-4 700 iipounds kunye nama-5,550. Unyanzelekile ukuba uqikelele ubunzima bakho bendawo ekuhlaleni xa ulinganisa i-cordwood.
Ukuthengwa kweendlwana okanye amadoda avuna i-pulpwood angakunika iinqwelo zemithi kwindawo yakho. Inkonzo yeHlathi yase-US okanye i- State Forester yakho inobuninzi bolwazi malunga nesisindo semilinganiselo yesithili. I-Pulpwood ethengwe ngoluhlobo lwee-chips zihlukeneyo kunye nenye ingxoxo.
I-log ejikeleziweyo, ngokubanzi, kufuneka yenziwe ibe ngamacwecwe asematyaleni okanye emacaleni ukuze ikwazi ukujonga ubungakanani bemithi kunye nexabiso. Iinkqubo ezintathu, okanye imigomo yemigangatho kunye nezikali, zenzelwe ukwenza oku nje. Babizwa ngokuba ngumthetho weDoyle, umlawuli weScribner kunye nolawulo lwamazwe ngamazwe.
Ziye zaphuhliswa ukuba ziqikelele i-foot foot mill, ngokuqhelekileyo icatshulwa njengeenyawo zeebhodi eziliwaka okanye i-MBF.
Ingxaki yethu xa usebenzisa le mithetho okanye imilinganiselo yelogi kukuba baya kukunika imiqulu emithathu eyahlukileyo kwimilo efanayo yezigodo.
Ukulinganisa iigodo ezilinganiselweyo - I-Doyle, iScribner, kunye nemithetho yelizwe jikelele - iya kunika ixabiso elinokuhluka ngokungafani ne-50%. Oku "kugqithisa" kubaluleke kakhulu ukusebenzisa iDoyle kunye ncinane usebenzisa i-International. Abathengi bathanda ukuthenga usebenzisa umthetho welogi ye-Doyle ngelixa abathengisi befuna ukuthengisa ngokusebenzisa iScribner okanye i-International.
Kuza kuhlala kukho umehluko kwimilinganiselo eqikelelwa kwi-scaler ukuya kwi-scaler. Bafumana ingxaki xa benciphisa inani langempela lemilinganiselo kwaye baqale ukuqikelela; bayalinganisa ngamaphupha angalunganga kwilogi, ulahleke uqikelelo olujikelezayo, kwaye ungayirhoxisi i-defect. Ukulinganisa okuchanekileyo kwemithi kunye neengodo kufuna udinga kunye namava.
Fact Conversion Factor
I-Mensurationists cringe kwigama lokuguqula igama. Bavakalelwa ngokuqinisekileyo ukuba ukuguqulwa ukusuka kwiyunithi enye yomlinganiselo ukuya kwelinye inyunithi yemilinganiselo yeenkuni akunakulungele ukuxhomekeka kuyo. Umsebenzi wabo ukuchaneka.
Kodwa kufuneka ube nendlela ethile yokuqikelela ubungakanani kwaye ukwazi ukuwela kwiiyunithi ezahlukileyo.
Ngoku unengcamango yokuba kunzima kangakanani le ngxaki yomqulu. Ukongeza isicatshulwa sokuguqulela kwimilinganiselo ingaphambukisa imilinganiselo yangempela nangaphezulu.
Ukuguqulwa okuthe ngqo kweziNyunithi eziNinzi eziMgangatho woThutho
Sebenza Ngokukhuselekileyo NgeCandelo leZinina - Izinto eziBalulekileyo zokuziLwazi nokuSebenza
I-White Oak, i-Red Oak, i-American Holly-Tree Leaf Key
Ukuthengwa kunye nokuSebenzisa iCandelo lokuThengisa uMbane
Izixhobo zokugijima kwemihlathi kunye nokubala kweebhola
Yiyiphi Inkuni Etshaya Eyona Miphumo Enhle? IsiPhulo soMlilo
Iintlobo zemithi yaseCatalpa
Ukuvuna i-Black Walnut Crop
Iimfuno kunye noQeqesho lokuba yi-Forester
Iibhotshi ezininzi ezikhethwa yiProjekthi zeHlathi
Ukuqonda iinkqubo ze-PADI eziPhuthumayo zokuPhumela
Ixesha le-Idol yaseMelika 15 Iinqophiso eziphezulu ezi-5
Imibuzo yoTyhutyana noMfundisi kunye nezimpendulo eziphakanyisiweyo
I-Yoga Eyisithupha Ihamba Ngabashukumi
Cinga ukutshala i-Oak eYard yakho
App EVP Analyzer App
Ingaba i-Marijuana Legalization yandisa i-Marijuana?
Ukudibanisa kwe 'Reír'
Yonke Into Okade Ufuna Ukuyazi Ngamadada ...
Iimfundiso malunga neCompsognathus
Uguqulelo olusisigxina (igrama)
Kukho i-Starry Pooch kwi-Sky Named Canis Major
Mizzou - Yunivesithi yaseMissouri, Columbia Admissions